ISISEKELO - I-Airbnb
Itholakala nje ibanga elifushane lemizuzu emi-2 ukusuka emasangweni e-Mt Buller, I-Base itholakala ngokuphelele kunoma ngubani oza entabeni efuna uhambo unyaka wonke! kulula futhi kutholakala kalula kulabo ababambe iqhaza ekugibeleni intaba, ukuhamba ngezinyawo, 4x4/off-road ukushayela, kanye nalabo abasentabeni ngemisebenzi efana nemishado, izingqungquthela nemibukiso.
I-WIFI IYATHOLAKALA KUSUKA JUNI KUZE KUBE U-OCTOBER
4.68 out of 5 stars from 141 reviews
4.68 · 141 okushiwo abanye
I-Base iyindawo yokulala esanda kwakhiwa, ezansi kwe-Mt Buller. Inikeza indawo yokuhlala engcono kakhulu yesimanje enamagumbi okulala amakhulu ayi-5, izindlu zokugezela zesimanje ezi-3 futhi ingakwazi ukuhlalisa abantu abadala abayi-12 ngokunethezeka!
Itholakala nje ibanga elifushane lemizuzu emi-2 ukusuka emasangweni e-Mt Buller, I-Base itholakala ngokuphelele kunoma ngubani oza entabeni efuna uhambo unyaka wonke! Njengoba iNgqungquthela yezintaba iyimizuzu eyi-15 kuphela ukusuka lapho, itholakala kalula futhi kalula kulabo ababambe iqhaza ekugibeleni ibhayisikili eNtabeni, ukuqwala izintaba, 4x4/off-road ukushayela, kanye nalabo abasentabeni ngemicimbi efana nemishado, izingqungquthela. kanye nemibukiso.
I-Base yamukela izivakashi zalo lonke uhlobo, kusukela emindenini, emaqenjini abangani, amakilabhu ezemidlalo namaBackpackers asuka emhlabeni wonke.
Uma sekuyisikhathi sokumisa izinyawo zakho ngemva kosuku olude entabeni, jabulela izinzuzo zetafula lethu lebhilidi, indawo yomlilo yezinkuni, indawo yokuphumula ene-plasma TV endaweni yethu yokuhlala evulekile enkulu noma ungabuka ifilimu noma udlale i-PS4 endaweni yethu. indlu yaseshashalazini yasekhaya!
I-Base ibuye ibe nendawo yekhishi ehlanganiswe ngokuphelele, i-washer + dryer yokupaka yangasese etholakalayo futhi.